ပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒအရ Solo Album ထုတ်ပြီး တကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်စေချင်နေကြတဲ့ Kpop Idol (၆) ဦး | News Bar Myanmar
K-Pop အဖွဲ့တိုင်းမှာ​တော့ ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံနဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေရှိကြစမြဲပါပဲ။ ကျန်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အပေးအယူမျှမျှ သီဆိုတတ်ကြတဲ့ အသံပါရမီရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့် တကယ်လို့များ Solol album ထုတ်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီး ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေကြတဲ့ Idol တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ ပရိသတ်တွေက Solo Album ထွက်လာဖို့အတွက် မျှော်လင့်အထားဆုံး Idol ၆ ဦးကတော့…
ကမ္ဘာအနှံ့က အားပေးမှုတွေအများအပြားရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်အဖွဲ့ BTS ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Jungkook ကိုတော့ Solo Debut လုပ်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ Jungkook ကတော့ သီချင်းပုံစံမျိုးစုံကို ကျွမ်းကျင်စွာသီဆိုနိုင်တဲ့ အသံပါရမီရှင်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက Solo Album နဲ့အတူ တကိုယ်တော် ပွဲဦးထွက်လာဖို့ တောင့်တနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
2. (G)I-DLE’s Soyeon
(G)I-DLE ရဲ့ Rapper ဖြစ်သလို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ Soyeon ကတော့ သီချင်းတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သီဆိုနိုင်ရုံသာမက ကပြဖျော်ဖြေမှုမှာလည်း ကြွေကျသွားအောင် ညှို့ယူနိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့် တကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်စေချင်နေကြတဲ့ Idol တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ Idol တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် (G)I-DLE အဖွဲ့ရဲ့သီချင်းတော်တော်များများကိုလည်း ရေးစပ်ပေးသူလည်းဖြစ်တဲ့ Soyeon ကိုတော့ ပရိသတ်တွေက Solo album ထုတ်စေချင်နေကြတာ သဘာဝကျနေပါတော့တယ်။
3. EXO’s D.O
EXO အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာတော့ နူးညံ့ချိုသာတဲ့အသံပိုင်ရှင် D.O ရဲ့ solo debut လုပ်ဖို့ကို ပရိသတ်တွေကတော့ လွန်စွာမှတောင့်တနေကြပါတယ်။ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းကလည်း တကိုယ်တော်သီချင်းဖန်တီးမှုတွေရှိပြီး ပရိသတ်တွေကို ချပြနေတာဖြစ်တာကြောင့် D.O ရဲ့ Solo Album ကို အမျှော်ကြီးမျှော်နေကြတာပါ။ D.O ကလည်းပဲ သူ့ရဲ့ solo album ကို လက်စသတ်နေတာဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာထွက်လာနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း ပြောထားတာဖြစ်လို့ ၂၀၂၁ နှစ်ကုန်လောက်မှာ ထွက်ရှိဖို့ ပရိသတ်တွေက မှန်းဆနေကြပါတယ်။
4. iKON’s Ju-ne
iKON အဖွဲ့ဝင် Ju-ne ရဲ့ Solo Album ကို စောင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ အမြောက်အမြားပါပဲ။ အားပေးသူတွေကတော့ Ju-ne သာ solo debut ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးသီချင်းပုံစံဖန်တီးမလဲဆိုတာကို သိချင်နေကြပါတယ်။ အသံလုံးကြီးကြီးနဲ့ ထူးခြားဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသံပိုင်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့စတိုလ်ဟာ iKON ရဲ့ပုံစံနဲ့ကွဲထွက်နေပြီး Rock ပုံစံဖက်စပ်တဲ့သီချင်းမျိုး ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ မှန်းဆနေကြပါတယ်။
5. TWICE’ Jihyo
TWICE ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သလို main vocalist တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Jihyo ကို အားပေးသူတွေက solo debut လုပ်စေချင်နေကြပါတယ်။ Jihyo မှာ အားကောင်းပြီး နားထဲကိုငြိမ့်ငြိမ့်လေးစီးမြောသွားစေနိုင်မယ့် အသံမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် တကယ်လို့သာ ballad (သို့) jazz သီချင်းမျိုးကို တကိုယ်တော်သီးသန့်သီဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင် လွန်စွာမှလိုက်ဖက်နေမယ်လို့ မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပရိသတ်အမြောက်အမြားကတော့ NCT’s Haechan ကို ကိုယ်ပိုင် solo album ထုတ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ နားဆင်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ Haechan ရဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီးရင် မေ့လို့မရတဲ့အထိ ရင်ထဲမှာစွဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ငြိမ့်ညောင်းချိုမြိန်တဲ့အသံကြောင့်ပဲ R&B သီချင်းပုံစံမျိုးဟာ Haechan ရဲ့အသံနဲ့ တော်တော်လေးလိုက်ဖက်နေမှာဖြစ်လို့ တကိုယ်တော်ပွဲဦးထွက်လာဖို့ကိုသာ တောင့်တနေကြတာဖြစ်ပါတော့တယ်။
Next ၂၀၂၁ ခုနှစ် ​မေလအတွင်း ​တောင်ကိုရီးယားမှာ နာမည်အ​ကျော်ကြားဆုံး K-Pop Idol များ »
Previous « ဇာတ်လမ်းသစ်တွေရိုက်ကူးမယ့်အကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးထိုင်းမင်းသားများ